IWCA အွန်လိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်း – နိုင်ငံတကာ စာရေးဌာနများအသင်း
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု- မတ်လ9ရက်၊ 2022
1:00-5:00 နာရီ EST
အဆိုပါကိုသွားပါ IWCA အဖွဲ့ဝင်၏ဆိုက် မှတ်ပုံတင်ရန်
IWCA အွန်လိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး အတွက် အဆိုပြုချက် တင်သွင်းရန် သင့်အား ဖိတ်ကြားအပ်ပါသည်။- အဆိုပြုလွှာများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ကပ်ရောဂါနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်နှင့် ကျန်းမာရေးအပေါ် ၎င်း၏သက်ရောက်မှုများကို ဆက်လက်ရုန်းကန်နေရစဉ်၊ ယနေ့ အတူတကွ ကျွန်ုပ်တို့အား အကောင်းမြင်မှုနှင့် ခွန်အား၊ အကြံဉာဏ်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုတို့ကို ပေးစွမ်းနိုင်လိမ့်မည်ဟု ကျွန်ုပ်တို့ မျှော်လင့်ပါသည်။
CCCCs 2022 နှစ်ပတ်လည်ကွန်ဗင်းရှင်းသို့သူမ၏ခေါ်ဆိုမှုတွင်၊ ပရိုဂရမ်ဥက္ကဌ Staci M. Perryman-Clark က "မင်းဘာလို့ဒီကိုရောက်နေတာလဲ" ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုစဉ်းစားဖို့ ကျွန်တော်တို့ကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့နှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ကျောင်းသားများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာများတွင် ရှိနိုင်သည် သို့မဟုတ် မရှိနိုင်ဟူသော ပိုင်နက်ဆိုင်ရာခံစားချက်ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားရန်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှိသော COVID19 ကပ်ရောဂါကို ဆက်လက်ရှာဖွေရင်း အွန်လိုင်းတွင် ကွန်ဖရင့်တစ်ခုကို တစ်ဖန်ရွှေ့ခြင်း၊ မျက်နှာဖုံးစွပ်ခြင်း၊ ကာကွယ်ဆေးများနှင့် အိမ်မှအလုပ်လုပ်ခြင်းဆိုင်ရာ အချက်အလက်များနှင့် မူဝါဒများ ကွဲလွဲနေခြင်းတို့ကြောင့် ငြီးငွေ့လာသည်—ရှင်သန်ရန် Perryman-Clark ၏ ဖိတ်ကြားချက်ကို ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ဖြေကြားကြမည်နည်း။ ဆန်းသစ်တီထွင်ဖို့၊ ရှင်သန်ဖို့လား။ “အရေးကြီးသော၊ လုပ်ငန်းစဉ်” တွင် ကျွန်ုပ်တို့ မည်သို့ပါဝင်ဆောင်ရွက်ကြမည်နည်း။ (Rebecca Hall Martini နှင့် Travis Webster၊ Brave/r Spaces အဖြစ် စာရေးစင်တာများ- အထူးထုတ် နိဒါန်း ပြန်လည်သုံးသပ်ချက်အတွဲ 1၊ စာစောင် 2၊ ဆောင်းဦး 2017) ပေါင်းစပ်၊ အွန်လိုင်း၊ အတု၊ နှင့် မျက်နှာချင်းဆိုင် ကျူရှင်သင်ကြားမှုဆိုင်ရာ ပါရာဒိုင်းအသစ်တွင်၊ စာရေးစင်တာနေရာများနှင့် ဝန်ဆောင်မှုများသည် ကျောင်းသားအားလုံးအတွက် မည်သို့ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်နိုင်မည်နည်း။ 2022 IWCA အွန်လိုင်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက်၊ အဆိုပြုချက်များကို စမ်းဘုတ်များအဖြစ် အောက်ပါမေးခွန်းများကို အသုံးပြု၍ ဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
လူမှုတရားမျှတမှုလုပ်ငန်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏စင်တာများတွင် မည်သို့ရှိသနည်း။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အာကာသထဲကို ဘယ်သူက ဖိတ်ခေါ်ခံရတယ်လို့ ခံစားရပြီး ဘယ်သူက မပေးတာလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကျွန်ုပ်တို့ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသော ကျောင်းသားများ၏ အသက်ရှင်သန်ရေးအတွက် ကျွန်ုပ်တို့ ဘာလုပ်နေသနည်း။ ရှင်သန်ဖို့ထက် ရှင်သန်ဖို့ထက် ငါတို့ဘာတွေလုပ်နေကြတာလဲ။
2022 IWCA အွန်လိုင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးတွင်၊ ဒီဇိုင်းနှင့် စမ်းသပ်မှုတွင် အချင်းချင်း ပံ့ပိုးကူညီရန် အာရုံစိုက်သည့် အစည်းအဝေးများအတွက် အဆိုပြုချက်များကို ဖိတ်ခေါ်ပြီး ထုတ်ကုန်မဟုတ်ဘဲ သုတေသနလုပ်ငန်းကို အာရုံစိုက်ပါ။ Sessions သည် အောက်ပါတို့မှ တစ်ခု သို့မဟုတ် တစ်ခုထက်ပို၍ လုပ်ဆောင်သင့်သည်-
ပါဝင်နိုင်မှုဆိုင်ရာ စင်တာသုတေသနကို ရေးသားခြင်းအတွက် ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသော နယ်ပယ်/လမ်းကြောင်းများအတွက် ကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုတစ်ခု ဖန်တီးရန် ပါဝင်သူများအား ဖိတ်ခေါ်ပါ
ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်၏အတိုင်းအတာကို ပိုမိုကောင်းမွန်စွာဖမ်းယူနိုင်စေရန် စာရေးစင်တာသုတေသနကို အသုံးပြုရန် ပါဝင်သူချင်းများအား လမ်းညွှန်ပါ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ ဇာတ်လမ်းများသည် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်တင်များအတွင်းနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာဆက်တင်များအတွင်းနှင့် ကျော်လွန်ပါဝင်သည့် ပရိသတ်များစွာအတွက် ဆွဲဆောင်မှုဖြစ်စေပါသည်။
အကယ်ဒမီရှိ အမျိုးသား၊ လူဖြူ၊ တတ်နိုင်သူ နှင့် ကိုလိုနီနယ်ချဲ့သမားတို့၏ ထုံးတမ်းစဉ်လာများနှင့် ပတ်သက်သည့် ကန့်သတ်ချက်များ သို့မဟုတ် ပြဿနာများကို တွန်းလှန်ခြင်းအပါအဝင် ပါဝင်ဖော်ကိုင်ဖက်များအား စာရေးစင်တာတွင် သုတေသနပြုရာတွင် ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်စေရန် လုပ်ဆောင်ပါ။
အခြားစာရေးစင်တာပညာရှင်များနှင့် ကျူရှင်ဆရာများထံမှ အကြံပြုချက်များအတွက် မျှဝေခြင်းလုပ်ဆောင်နေပါသည်။
ပါဝင်ပတ်သက်မှုနှင့် လူမျိုးရေးခွဲခြားမှုဆန့်ကျင်ရေးဆိုင်ရာ ရည်ရွယ်ချက်ကောင်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ရန်အတွက် ခိုင်မာသောခြေလှမ်းများအဖြစ် ပါဝင်သူများအား လမ်းညွှန်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်ခွင်ကို COVID အကျိုးသက်ရောက်ပုံကို လမ်းညွှန်ထားခြင်းဖြင့် ကျွန်ုပ်တို့၏စာရေးဌာနနေရာ၊ ပုံစံ၊ နှင့်/သို့မဟုတ် မစ်ရှင်သည် မည်သို့ပြောင်းလဲနိုင်သည်ကို အကြံဉာဏ်ပေးကာ ပါဝင်သူများကို အကြံဉာဏ်ပေးနိုင်ရန် လမ်းညွှန်ပါ
တွန်းလှန်ရန်၊ ရှင်သန်ရန်၊ ဆန်းသစ်တီထွင်ရန်နှင့် ရှင်သန်ရန် လုပ်ဆောင်ချက်အစီအစဉ်များရေးဆွဲရန် ပါဝင်သူများအား ဖိတ်ကြားပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏နယ်ပယ်၏ ခွန်အားတစ်ခုသည် ကျွန်ုပ်တို့၏ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုသဘောသဘာဝဖြစ်သည်—ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်နားလည်မှု—နှင့်——ကွဲပြားမှု၊ သာတူညီမျှမှုနှင့်—စာရေးဌာနများတည်ရှိရာနေရာတိုင်းတွင် ကွဲပြားမှု၊ သာတူညီမျှမှုနှင့် ပေါင်းစည်းမှုတို့ပါဝင်လာရန် စုစည်းပါဝင်လာရန် ဖိတ်ခေါ်ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းသည် ဒီဇိုင်းနှင့်စမ်းသပ်မှုတွင် အချင်းချင်း ပံ့ပိုးကူညီခြင်းအကြောင်းဖြစ်သောကြောင့် အဆိုပြုချက်များသည် လုပ်ငန်းစဉ်မဟုတ်ဘဲ သုတေသနပြုခြင်းမဟုတ်ဘဲ လုပ်ငန်းစဉ်အပေါ် အာရုံစိုက်သင့်သည်။ သုတေသနတွေ့ရှိချက်များကို မျှဝေခြင်းအပေါ် အာရုံစိုက်သည့် ကန့်သတ်အရေအတွက်ကန့်သတ်ထားသော အဆိုပြုချက်များအတွက် အထူးဖော်မတ်တစ်ခု—“Data Dash”—ကို သိမ်းဆည်းထားသည်။ ပုံစံမခွဲခြားဘဲ အဆိုပြုချက်များအားလုံးသည် စာရေးဌာနတွင် ပညာသင်ဆုနှင့်/သို့မဟုတ် အခြားဘာသာရပ်များမှ ပညာသင်ဆုများရရှိရန် ကြိုးပမ်းသင့်သည်။
အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ (50 မိနစ်): အထောက်အကူပြုသူများသည် စာရေးစင်တာသုတေသနနှင့်ပတ်သက်သော မြင်သာထင်သာသောစွမ်းရည်များ သို့မဟုတ် နည်းဗျူဟာများကို သင်ကြားရန် လက်ဆင့်ကမ်း၊ အတွေ့အကြုံရှိသော လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို ဦးဆောင်သည်။ အောင်မြင်သော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ အဆိုပြုချက်များတွင် သီအိုရီ အယူအဆများဖြင့် ကစားရန် အချိန် သို့မဟုတ် ရရှိထားသော လုပ်ဆောင်ချက် သို့မဟုတ် ကျွမ်းကျင်မှုများ၏ ထိရောက်မှု (အုပ်စုကြီး သို့မဟုတ် အုပ်စုငယ် ဆွေးနွေးမှု၊ စာဖြင့် တုံ့ပြန်မှုများ) ပါဝင်သည်။
စားပွဲဝိုင်းအစည်းအဝေးများ (50 မိနစ်): စည်းရုံးရေးမှူးများသည် စာရေးဌာန သုတေသနနှင့် သက်ဆိုင်သည့် သီးခြားပြဿနာတစ်ခုအား ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသည်။ ဤဖော်မတ်တွင် တင်ဆက်သူ 2-4 ဦးကြားမှ တိုတောင်းသော မှတ်ချက်များ ပါ၀င်ပြီး တက်ရောက်လာသူများနှင့် တက်ကြွပြီး ခိုင်မာသော ထိတွေ့ဆက်ဆံမှု/ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြင့် လမ်းညွှန်မေးခွန်းများ ပေးခဲ့သည်။
ပူးပေါင်းရေးသားခြင်းစက်ဝိုင်းများ (မိနစ် 50): ပံ့ပိုးကူညီသူများသည် ပူးပေါင်းရေးသားထားသော စာတမ်း သို့မဟုတ် ပစ္စည်းများကို ထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ထားသော အဖွဲ့စာရေးလှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို လမ်းညွှန်ပေးပါသည်။
Round Robin ဆွေးနွေးချက် (50 မိနစ်): ပံ့ပိုးကူညီသူများသည် ခေါင်းစဉ်တစ်ခု သို့မဟုတ် ဆောင်ပုဒ်တစ်ခုကို မိတ်ဆက်ပြီး စကားဝိုင်းကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် ပါဝင်သူများအား ခွဲထွက်အဖွဲ့ငယ်များအဖြစ် စုစည်းပါ။ " round robin" ပြိုင်ပွဲများ၏ စိတ်ဓာတ်ဖြင့် ပါဝင်သူများသည် ၎င်းတို့၏ စကားဝိုင်းများကို တိုးချဲ့ရန်နှင့် ချဲ့ထွင်ရန် 15 မိနစ်အကြာတွင် အုပ်စုများကို ပြောင်းလဲပါမည်။ အနည်းဆုံး နှစ်ပတ်ကြာ စကားပြောဆိုပြီးနောက်၊ နိဂုံးချုပ်ဆွေးနွေးမှုတစ်ခုအတွက် အဖွဲ့တစ်ခုလုံးကို စည်းရုံးရေးမှူးများက ပြန်လည်ခေါ်ယူမည်ဖြစ်သည်။
Data Dash တင်ပြချက်များ (၁၀ မိနစ်)- သင့်အလုပ်ကို 20×10 ပုံစံဖြင့် တင်ပြပါ- ဆလိုက်နှစ်ဆယ်၊ ဆယ်မိနစ်။ ပိုစတာစက်ရှင်အတွက် ဆန်းသစ်တီထွင်သော အစားထိုးမှုသည် အမြင်အာရုံ ကျားကန်များဖြင့် လိုက်ပါသွားသော အတိုချုံး၊ ယေဘူယျ-ပရိသတ် ဟောပြောပွဲများအတွက် သင့်လျော်သော နေရာတစ်ခု ပေးဆောင်ပါသည်။ Data Dash သည် သုတေသနနှင့်ပတ်သက်ပြီး အစီရင်ခံခြင်း သို့မဟုတ် ပြဿနာတစ်ခုတည်း သို့မဟုတ် ဆန်းသစ်တီထွင်မှုတစ်ခုအား အာရုံစိုက်ခြင်းအတွက် အထူးသင့်လျော်သည်။
လုပ်ဆောင်နေသော အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲများ (အမြင့်ဆုံး 10 မိနစ်): Works-in-Progress (WiP) အစည်းအဝေးများကို တင်ဆက်သူများသည် ၎င်းတို့၏ လက်ရှိသုတေသနပရောဂျက်များကို အကျဉ်းချုံးဆွေးနွေးကြပြီး ဆွေးနွေးမှုခေါင်းဆောင်များ၊ အခြား WiP တင်ဆက်သူများနှင့် ဆွေးနွေးမှုတွင် ပါဝင်နိုင်သည့် အခြားသော ဆွေးနွေးပွဲတက်ရောက်သူများ အပါအဝင် အခြားသုတေသီများထံမှ အကြံပြုချက်များကို လက်ခံရရှိသည့် စားပွဲဝိုင်းဆွေးနွေးပွဲများ ပါဝင်မည်ဖြစ်သည်။
တင်သွင်းရမည့်ရက်- ဖေဖော်ဝါရီ 20၊ 2022
အဆိုပြုလွှာတင်သွင်းရန်နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရန်အတွက် စာရင်းပေးသွင်းရန်၊ သွားရောက်ကြည့်ရှုပါ။ https://iwcamembers.org.
မေးခွန်းများ? ဆက်သွယ်ရန် ကွန်ဖရင့် ကုလားထိုင်များထဲမှ Shareen Grogan၊ shareen.grogan@umontana.edu ဒါမှမဟုတ် John Nordlof၊ jnordlof@eastern.edu.